Igumbi Lendawo kaBoyce #2 - I-Airbnb
Igumbi Lendawo kaBoyce #2
Quirpon, Newfoundland and Labrador, Canada
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguFrédéric
* * * NCEDA UFUNDE INDLU NGAPHAMBI KOKUBHUKISHA IGUMBI #2.
Ukuba liqela elinabantu abayi-4 ukuya kutsho kwabayi-7, kukho indawo eyi-2 engakumbi onokuyiqesha xa ufuna. Jonga enye indlu yethu, phantsi kwendawo ethi "IBoyce 's Place Room #1, # 2 (imali eyongezelelekileyo yegumbi lesithathu)"
Ukuba ufuna igumbi elinye kuphela, jonga enye indlu yethu phantsi kwendawo ethi "Igumbi Lendawo kaBoyce #1"
Ukuba ufuna ukuphila izinto onokuzonwabela eNewfoundland, le yindawo yokuhlala! Indawo kaBoyce yindawo yezinto ezenziwayo; abantu abaninzi basekuhlaleni bahlala kuyo ukuze batyelele okanye batyelele emdlalweni wekhadi. UBoyce nabahlobo baza kukugcina wonwabile ngexesha lokuhlala kwakho lonke. Ukuba ubamba i-cod uza kukuphekela ngobo busuku. I-codfish yakhe eqhotsiweyo yenye yezona ndawo zinokungcamla kamnandi kule ndawo!
UBoyce ngumntu wasekuhlaleni wokwenyani, wazalwa waza wakhuliswa eQuirpon. Uyayazi i-Quirpon kunye namanzi ajikelezileyo njengomva wesandla sakhe. Eyona nto imnandi kukuba uyakuthanda ukwabelana ngolwazi lwakhe. Indawo yakhe isemanzini kwaye yindawo apho abantu abaninzi basekuhlaleni beentlanzi beza kutyelela khona baze bancede ekucoceni intlanzi. Thatha ithuba lokubukela indlela eyenziwa ngayo uze umamele izinto zasekuhlaleni. Ungafunda ibinzana elinye okanye amabini! Ukuba akukho ukuloba, yiya uhlale ezibukweni uze ukhangele kwisiqithi saseQuirpon. Yindawo entle yokuphumla.
4.85 · Izimvo eziyi-66
Indawo kaBoyce ikwindawo ekufutshane neQuirpon, kodwa ungakhathazeki ukuba yindawo ekufutshane ethe cwaka, ngaphandle kweengcungcu. Kukho ulwandle oluncinci ngqo kwindlu apho kukho umlilo waselunxwemeni. Umzila omfutshane wokuhamba usekupheleni kwendlela malunga neekhilomitha eziyi-1 ukusuka kwindawo kaBoyce. Inika umbono omhle wolwandle, ii-icebergs kunye ne-Quirpon.
Mighty Yeti Adventures
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quirpon